Uluhlu lweWiFi iingxaki ekhaya? I-Devolo dLAN 1200 | Iindaba zeGajethi
Uluhlu lweWiFi iingxaki ekhaya? I-Devolo dLAN 1200+ sisisombululo [UHLAZIYO]
Oo imizila ye-WiFi iinkampani zeefowuni "zisinika"! Ingxaki ehlupheke ngabasebenzisi abaninzi bokunxibelelana kwe-WiFi yasekhaya eSpain iyafana, ubungakanani bayo. Kwaye kukuba ukusuka kwi-85m2 yekhaya, sele kunzima ukuba uqhagamshelo lweWiFi lufikelele kuwo onke amagumbi ngokulinganayo. Kwelinye icala, sinengxaki yokunxibelelana kwe-Ethernet, kwaye loo nto kukuba i-router ihlala ikumbindi wekhaya, nangona kunjalo, baninzi abadlali abakwishumi elivisayo abangakwaziyo ukucofa uqhagamshelo lwabo kwimidlalo yevidiyo ngenxa yeWiFi. I-Devolo dLAN 1200+ yi-PLC esiba sisisombululo kuzo zonke iingxaki zonxibelelwano ekhaya.
Sijongene nemveliso engabizi kakhulu, kuyinyani, kodwa ukuba kufuneka sicace gca ukuba isoftware esemva kwayo, ihamba nomgangatho wezinto kunye negama elaziwayo eliziqalisayo, lisinyanzela ukuba siqwalasele le PLC njengenye eyona inamandla kwintengiso, ubuncinci ephepheni. Kodwa yonke into ihleli kumanzi e-borage njengoko kutshiwo, yiyo loo nto sizamile kwaye sifuna ukukuxelela ukuba isebenza njani kwaye kufanelekile I-Devolo dLAN 1200+ njengoko besitshilo.
1 I-Devolo, itekhnoloji yaseJamani yamkelwe eSpain
3 Iziphumo emva kovavanyo lweDevolo dLAN 1200+
4 Ixabiso leDevolo dLAN 1200+ kunye neendawo zokuthengisa
I-Devolo, itekhnoloji yaseJamani yamkelwe eSpain
Ingxaki yoluhlu lwe-WiFi bububi obugqithisileyo kwilizwe lethu, ngenxa yesi sizathu, uDevolo unolwazi olukhethekileyo ngokuthengisa izisombululo zayo kwiSpanish. I-Devolo luphawu olusekwe kwiminyaka eli-14 eyadlulayo eJamani, ezikhethekileyo kuphuhliso lweendlela zonxibelelwano zabathengi, kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso, kwaye zikwizingcali zokwenza uthungelwano lusebenze kakuhle eziofisini. I-Devolo dLAN 1200 yenye yeebhejethi zayo zamva nje kwaye yenye yezona zinamandla esinokuzifumana kwimarike, ngamandla okudlulisela ukuya kuthi ga kwi-1200 Mbps.
Masiqale ngezokwenyama, kuzo zombini izixhobo siya kuba neendawo zombane, oku kuthetha ukuba asizukuphulukana neziseko ezimbini zekhaya ngokusebenzisa iDevolo dLAN 1200+, sinokuqhubeka nokusebenzisa isokethi efanayo ngenxa yebhulorho yayo. Ukuze usebenzise uqhagamshelo lwenethiwekhi yasekhaya nge-Devolo dLAN 1200+ siza kufuna uqhagamshelo kwezi zixhobo zimbini, eyokuqala isebenza njengezibuko lonxibelelwano kwigridi yamandla asekhaya, kwaye eyesibini isebenza njengomamkeli kunye nomthumeli. yonxibelelwano lweWiFi, yale modokanye sinokukhetha ukusebenzisa amazibuko e-Gigabit Ethernet ngokudlulisela ukuya kuthi ga kwi-1200 Mbps kuxhomekeke kumandla esiwenze ngekhontrakthi ekhaya, okanye ukukhupha uqhagamshelo lwasekhaya lweWiFi.
IDevolo yesibini, esebenza njengendawo yokugqibela yosasazo, inayo ithuba lokudibanisa iintambo ezimbini ze-Ethernet (ilungele igumbi labadlali abaninzi okanye iindawo zokusebenzela), kunye nendawo yokubhalisa yeWiFi, kulandela imiyalelo yayo elula esinokukhupha inethiwekhi entsha yeWiFi okanye ikhonkrithi yenethiwekhi yokuqala yeWiFi yendlu yethu, kunye nelahleko yamandla enexabiso elingenakuthelekiswa nanto .
Ngokunxibelelana kwe-WiFi, siya kuba nakho ukukhetha ibhendi yesiqhelo ye-2,4 GHz, kananjalo, leyo ngoku ithandwayo kukudityaniswa kwefiber optic eSpain, leyo 5 GHz, ekwaziyo ukubonelela ngaphezulu kwe-300 Mbps zokuhambisa idatha ngonxibelelwano olungenazingcingo, kujongwa.
Iziphumo emva kovavanyo lweDevolo dLAN 1200+
Kodwa asinakuhlala ngaphandle kokuzama, ke sigqibe kwelokuba sidibanise isixhobo kwaye silandele imiyalelo. Ngokuqinisekileyo Iplagi kunye nokudlala, kunxibelelwano lokuqala kufuneka sixhume i-Devolo dLAN 1200+ nge-Ethernet kwi-router yethu ngentambo ebandakanyiweyo kwiphakheji kunye qhagamshela kwivenkile ekufuphi, ngokukhethekileyo ngaphandle kwamasela okanye iintambo ezandisiweyo, inye kuphela.
Ngoku siza kuya kwelinye icala lendlu, apho sineengxaki zonxibelelwano, kwaye sixhuma esinye isixhobo. Lixesha lokuba ulinde, ngelixa i-LED ebomvu ibenyezela, iya kuthi ekugqibeleni ibe mhlophe, oku kuthetha ukuba yonke into ikulungele ukusebenzisa. Ngoku sinezinto ezimbini onokukhetha kuzo, qhagamshela kwinethiwekhi yakho yeWiFi, usebenzisa igama kunye negama lokugqitha elifakwe kwisitikha seadaptha, okanye susa intambo ye-Ethernet, Sizame zombini iindlela ngezi ziphumo:
Konxibelelwano olunika ukuya kwi-300 Mbps yefayibha yokukhanya
Unxibelelwano WiFi ye-Devolo dLAN 1200+ ene-iPhone 6s: Ukufikelela kwisantya ngaphezulu kwe-100 Mbps macala kwaye uzinzile kunye I-6 m / s ping kunxibelelwano lwe 2,4 GHz (Oko kuthetha ukuba ubuninzi bamandla ngaphandle kwelahleko).
Unxibelelwano lwentambo ye-Ethernet (CAT 5e) yeDevolo dLAN 1200+ kwiPC: Ukufikelela kwisantya se 230 Mbps macala kwaye izinzile phakathi I-4 kunye ne-6 m / s ping.
Unxibelelwano lwentambo ye-Ethernet (CAT 5e) yeDevolo dLAN 1200+ ukuya kwifayile ye- PlayStation 4: Ukufikelela kwisantya esiphakathi I-80 kunye ne-90 Mbps ene-NAT 2.
Emva kovavanyo, singatsho ukuba nangona singakhange sikwazi ukufumana unxibelelwano olungenamposiso kunye nelahleko, inika iziphumo ezingcono kunonxibelelwano lwe-WiFi kwigumbi elinye, phantse kungabikho lag yokufaka. Ke ngoko uvavanyo luyimpumelelo.
Ixabiso leDevolo dLAN 1200+ kunye neendawo zokuthengisa
Isixhobo ipapashwa nge- € 139,90 kwiwebhusayithi yayo esemthethweni, le yeyona nto iphambili yokuthenga. Kwelinye icala, sinokuyifumana ngokulandelelana kwiindawo zokuthengisa ezinje ngeMedia Markt okanye iAmazon ngexabiso eliphakame kancinci, kuba eAmazon siyifumana phakathi kwe- € 150 kunye ne- € 120 malunga, Ukuba yimveliso yeNkulumbuso eyonwabela ukuhanjiswa simahla kwiiyure ezingama-24.
Emva kweveki yokuvavanya i-Devolo PLC, sinokuqiniseka ukuba ayithembisi. Nangona kunjalo, izinto ezininzi ziya kuchaphazela ukusetyenziswa kwayo njengomgangatho womnatha wombane wasekhaya, ukuphazamiseka nokunye okuninzi. Nangona, eyona nto ibaluleke kakhulu xa udlala, ongasekhoyo, akunakunyuswa, uyonyusa kuphela phakathi kwe-3 kunye ne-6 m / s, eyenza ukuba ibe yenye indlela enomdla kubadlala umdlalo. Sifumene i-NAT 2 kunye ne-Open NAT kwi-PlayStation 4, ngamandla afanayo esiwafumanayo ngentambo emalunga ne-15m CAT 5e.
Kwelinye icala, ukwandiswa kwenethiwekhi yeWiFi kunokuba yinto ekhethwe ngabasebenzisi abaninzi, inyani kukuba isombulula ngokuqinisekileyo iingxaki zonxibelelwano, siza kufumana uqhagamshelo lweWiFi akukho lahleko okanye latency ngamandla afanayo awayekhutshwa yirouter ephambili. Esi isenokuba sesona sizathu siphambili sokuba sijongane nemveliso ebiza ngokungathandabuzekiyo, kodwa inikezele ngento eyithembisayo. Isenokungabi lukhetho lokuqala xa uthenga i-PLC, kodwa ngokungathandabuzekiyo iya kuba yeyonyulwe kwiimeko ezinzima okanye ezicingelwayo zonxibelelwano okanye zeofisi.
€110 a €150
I-Devolo 1200+ dLAN WiFi ac Starter Kit
Iplagi kunye nokudlala
Umbala omhlophe kuphela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uluhlu lweWiFi iingxaki ekhaya? I-Devolo dLAN 1200+ sisisombululo [UHLAZIYO]
Akukho nto ifana neAirport endiyitshatileyo ndithenga ezi mbiza kwaye ekuphela kwento oyifezekisayo kukungakhuseleki ngakumbi kwinethiwekhi. Musa ukukhulisa nto. Thenga iAirPort kwaye ekugqibeleni ngaphandle kweengxaki zokwamkela, yenza inethiwekhi elula ungabi wedwa ngokupheleleyo, uqhagamshela izithethi ezimbalwa okanye umshicileli. Akunanto yakwenza nayo.
Luluphi uluhlu lweemitha, kukuba andifuni ukunika umqondiso kummelwane, ukuba ukuba banokuchaza ikhowudi, enkosi.
I-Blackberry ibeka umbono wayo kuphuhliso oluzimeleyo lwemoto
I-Super Mario Run, umdlalo ukude kakhulu kunoko besikulindele kwaye ngaphezulu kwayo yonke le nto besiyifuna